Mpilalao NFL 10 ambony karama indrindra 2022 - Victor Mochere
Ny NFL dia mirehareha amin'ny maha-meritocracy izay ahafahan'ny mpilalao tsara indrindra mahazo vola be indrindra. Amin'ny ankapobeny dia marina izany. Ny ekipan'ny NFL dia tsy matahotra mandoa vola be amin'ny mpilalao avo lenta. Quarterbacks no manjaka amin'ny lisitry ny mpilalao NFL karama indrindra. Quarterback no toerana manan-danja indrindra amin'ny NFL maoderina ary ny fanombohana avo lenta dia karamaina mifanaraka amin'izany. Saika ny fifanarahana vaovao rehetra ho an'ny quarterbacks francais dia mampiakatra azy ireo ho eo an-tampon'ny lisitry ny mpilalao NFL karama indrindra. Satria tsy mitsaha-mitombo ny sandan'ny toerana, dia hiakatra koa ny vola azony.
Ireto ny mpilalao NFL 10 ambony karama indrindra.
$ 87 tapitrisa
$ 72.5 tapitrisa
$ 44.8 tapitrisa
$ 33.4 tapitrisa
$ 33.3 tapitrisa
$ 31.2 tapitrisa
$ 31 tapitrisa
$ 30.8 tapitrisa
$ 27.7 tapitrisa
$ 26.2 tapitrisa
Ahoana no ahazoana tombony betsaka amin'ny varotra tsy fivadihana
Wealthy Peeps hoy:
Jona 17, 2022 amin'ny 2: 09 am